Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "okusesikweni", iqabane iimvakalelo?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "okusesikweni", iqabane iimvakalelo?
Indlela 3500 yen intsingiselo
zobungcali abaxeli-mathamsanqa of "ubulungisa" isikhundla umva ukufumana apreyizali ezamahala
kwakhona enye sokubandakanyeka ikhadi ku Major Arcana "okusesikweni" yenye esibonisa ingqiqo eseleyo kunye karhulumente ezinzileyo kuyinto sheets. Ingaba wonke enobulungisa ukuba kungenxa ubulungisa, ukuba kuba sele icala ingqiqo wobulungisa yonke indawo, ngokuphathelele uthando unalo awuyicingi ukuba isomer ethile, kodwa ayinalo ikhadi kakhulu ukusebenza kukho izinto.
Xa kwafika eli khadi ngaphandle, kunokuba kufuna intshukumo okanye izinto ezininzi kakuhle, kungcono ukuba ukwamkela njengoko isiphelo, usenokuba ube nako nijike le meko.
xa nezinye iimvakalelo zomntu
indawo ezintle "okusesikweni" ibimele ukuba lithetha "okusesikweni" isigxina ezintle, loo nto ibonisa ukuba le meko yangoku uzinzile kakhulu ukulinganisela unayo. Qhamani oko ezikude ubunzima kunye nemigudu ekugqibeleni, ukukhawulelana iziphumo kunye neziphumo kuyo, Toka kusenokwenzeka ukuba afumane umvuzo, kubudlelwane uthando, ingxaki leyo isonjululwe limela ngengqiqo yokuba intsalela ingahoywa. Ukuba umntu unayo
lover, ukuba iimvakalelo zakhe wayeza Siyalele ukuba umntu omnye kuphela, nkqu kwimeko uthando ezingabuyekezekiyo, yena ubonisa ukuba awunayo indlela abavakalelwa ngayo kakubi ngawe. Ngenxa yokuba phakathi kwabantu ibonisa urhulumente akukho ukusilela ezibalulekileyo okanye inkathazo, ukuze ubudlelwane bezinto, kuya kuba nako ukubeka ikamva ukuba sizana kunye ehambelana kuba ngentembeko ukuya kwelinye iqela. Cela nokulindelekileyo, injongo engaphaya isidanga
, ukuze atshitshise imali yalo yobulungisa, makhe siyalixabisa iimvakalelo elinye iqela.
ngaphandle kokulindelekileyo kakhulu ukuya kwelinye iqela, ukuba kunokwenzeka ukuba ukwamkela wena, iimeko ezingqongileyo ezabo wabo omhle uphawu wenza kakuhle. Xa ugqibe into Ndimamela uluvo lwakhe, ukuba inyathelo balihloniphe, Isiphelo thina inene ngokuthanda kwakho. _x00 0D_
ukuba ikhadi simi reverse iimvakalelo
"ubulungisa" yomntu umva indawo uthathwa ukuba intsingiselo "okusesikweni" kukuthi, ibonisa ukuba imeko ezingqonge abantu ababini ayikho kodwa izinzile kuwe. Kwakhona ngoku ndicinge ukuba uzinze, kuya kubakho ithuba lokuba kuvela izinto ukuya into ngesiquphe ezingazinzanga. Ulwalamano naye
waba phezu kuphila kakuhle kukuthi, okanye uye waba ngenxa nobuhlungu ngesiquphe, ezimbini-ntle, ezifana ukuvela imbangi, ukuze abe imiqondiso inkathazo lwenzeka ukuzola.
Xa kwafika eli khadi ngaphandle, kubalulekile ukuba aphinde imali eseleyo. Ukuba kunokwenzeka ukuba kokulindelekileyo ngokugqithiseleyo welinye icala, ukuba ifuna ukulungiswa Kakade ke, kunokuba efuna into kumdlali welinye icala, ukubonakalisa phezu kwakhe, zakhe ukulungisa inxalenye ukuba ilungiswe ungenza jika iimvakalelo kuwe.